Mpa Abaw! Animia Ho Hia Paa! | Adesua
KENKAN WƆ Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Aymara Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Bicol Bulgarian Catalan Cebuano Chichewa Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Croatian Czech Danish Dutch Efik English Estonian Ewe Finnish French Ga Georgian German Greek Greenlandic Guarani Haitian Creole Hiligaynon Hungarian Icelandic Igbo Iloko Indonesian Italian Japanese Kazakh Kikuyu Kinyarwanda Kirghiz Korean Kwangali Kwanyama Latvian Lingala Lithuanian Luo Malagasy Malay Maltese Myanmar Ndebele Ndonga Nepali Ngabere Norwegian Nzema Oromo Pangasinan Polish Portuguese Quechua (Ayacucho) Quechua (Bolivia) Romanian Russian Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Shona Sinhala Slovak Slovenian Spanish Sranantongo Swahili Swati Swedish Tagalog Tahitian Thai Tigrinya Tsonga Tswana Turkish Twi Ukrainian Uzbek Venda Vietnamese Waray-Waray Wolaita Xhosa Yoruba Zulu
Woyɛ Yehowa Dansefo a wode mfe pii asom? Wo yam a anka wo hokafo ka wo ho ma mo nyinaa resom Yehowa?
Anaa wo Bible suani a kan no na ɔbɔ mmɔden ani nnye nokware no ho bio ma wudi ho yaw?
Anuanom bi a wɔwɔ Britain suahu bɛboa wo ma woahu nea enti a ɛnsɛ sɛ wopa abaw. Bio nso, wubehu sɛ, sɛ ‘wotow wo paanoo pete nsu ani’ a, wubetumi aboa nkurɔfo ma wɔabegye nokware no.—Ɔsɛnk. 11:1.
ANIMIA HO HIA PAA
Ade biako a ehia paa ne sɛ wubemia w’ani afa nokware no aniberesɛm na wode wo ho afam Yehowa ho. (Deut. 10:20) Saa na Georgina yɛe. Bere a ɔne Yehowa Adansefo fii ase suaa Bible 1970 mu no, ne kunu Kyriacos bo fuwii. Ɔfaa kwan biara so sɛ ɔbɛma wagyae adesua no, na na ɔmma Adansefo no mma fie hɔ. Oyiyii Yehowa Adansefo nhoma biara fii fie hɔ.
Bere a Georgina fii ase kɔɔ asafo nhyiam de, na asɛm no asɛe koraa; Kyriacos koko paee. Da bi mpo de, ɔkɔɔ Ahenni Asa so kɔyɛɛ dede. Onuawa bi hui sɛ Kyriacos tumi ka Greek kasa sen Borɔfo, enti ɔfrɛɛ onua bi a ɔyɛ Greekni a ɔwɔ asafo foforo mu sɛ ɔmmra. Onua no bae no, ɔtɔɔ ne bo ase dwudwoo Kyriacos bo, na ɔpenee so ma onua no ne no suaa Bible asram kakra bi mpo. Nanso akyiri yi Kyriacos gyaee adesua no.
Georgina kunu Kyriacos kɔɔ so tan n’ani mfe abiɛsa. Ɔkae sɛ, sɛ Georgina nnim na ɔbɔ asu a, obegyae no. Ɛda a Georgina rekɔbɔ asu no, ɔbɔɔ mpae denneennen srɛɛ Yehowa sɛ ɔmmoa no na ne kunu annyae no. Bere a Adansefo no bae sɛ wɔrebɛfa Georgina akɔ nhyiam no, Kyriacos ka kyerɛɛ wɔn sɛ: “Munni kan na yedi mo akyi.” Ɔkɔɔ anɔpa dwumadi no, na bere a wɔrebɔ ne yere asu nyinaa na n’ani tua!
Georgina kunu rebɔ asu. Bere a Georgina fii ase ne Adansefo no bɔe no, egyee bɛyɛ mfe 40 ansa na ne kunu rebɔ asu
Bere bi akyi no, Kyriacos maa ne yere asom dwoo no kakra, na Kyriacos yɛɛ nsakrae pii. Afei anigyesɛm, Georgina kunu bɔɔ asu! Bere a Georgina fii ase ne Adansefo no bɔe no, egyee bɛyɛ mfe 40 ansa na ne kunu rebɔ asu. Dɛn na ɛboaa Kyriacos? Ɔkae sɛ: “Nea m’ani gye ho wɔ Georgina ho ne sɛ wamma biribiara antwe no ansan.” Georgina nso kae sɛ: “Me kunu ateetee nyinaa akyi no, na masi me bo sɛ merennyae Onyankopɔn som da. Daa na mebɔ Yehowa mpae, na mampa abaw da.”
NIPASU FOFORO HO HIA
Ade foforo a ebetumi aboa wo hokafo ne sɛ wobɛhyɛ nipasu foforo no. Ɔsomafo Petro tuu Kristofo mmea awarefo fo sɛ: “Mommrɛ mo ho ase mma mo ankasa mo kununom, na sɛ ebinom anyɛ aso amma asɛm no a, ɔyerenom nam wɔn abrabɔ so anya wɔn a ɔkasa nka ho.” (1 Pet. 3:1) Christine de saa afotu no yɛɛ adwuma, nanso egyee mfe pii ansa na ne kunu rebegye nokware no. Bɛboro mfe 20 ni a Christine bɛyɛɛ Yehowa Dansefo. Bere a ofii ase suaa ade no, na ne kunu John nnye Onyankopɔn nni. Ná John ani nnye nyamesom ho, nanso ohui sɛ Christine ntoto ne som ase koraa. John kae sɛ: “Mihui sɛ Christine som yɛ no dɛ. Ɔsom no hyɛɛ no mpamden ma ɔbɛyɛɛ ɔbea kokodurufo, na eyi boaa me wɔ ahohia mmere mu.”
Christine amfa ne som ampuapua ne kunu. Ne kunu kae sɛ: “Christine hui sɛ ɛnsɛ sɛ ɔde ne som guan me ho; onyaa me ho abotare maa me ara metoo me bo ase suaa ade.” Na Christine nim sɛ John ani gye nyansahu ne abɔde ho, enti sɛ ohu biribi saa wɔ Ɔwɛn-Aban anaa Nyan! mu a, ɔde kyerɛ no ka sɛ: “Migye di sɛ w’ani begye ho sɛ wobɛkan asɛm yi.”
Bere bi akyi no, John gyaee adwuma na ofii ase duaduaa nhwiren ne nsensan maa nkurɔfo. Afei onyaa bere de dwinnwen asetenam nsɛm ho kɔɔ akyiri. Obisae sɛ, ‘Obi na ɔhyɛɛ da bɔɔ nnipa anaa yɛbae ara kwa?’ Da bi na onua bi ne John rebɔ nkɔmmɔ, na obisaa John sɛ, “W’ani begye ho sɛ obi ne wo besua Bible anaa?” Saa bere no na John abehu sɛ Onyankopɔn wɔ hɔ, enti ɔpenee so sɛ obesua ade.
Eye paa sɛ Christine ampa abaw. Ɔde mfe 20 bɔɔ mpae sɛ John bɛba nokware no mu, na onyaa ne koma so ade—John bɔɔ asu. Seesei wɔn baanu nyinaa de nsi ne ahokeka resom Yehowa. John kae sɛ: “Nneɛma abien na ɛma mebaa nokware no mu. Nea edi kan, Adansefo no pɛ nnipa na wɔn yam ye. Nea ɛto so abien, sɛ wo yere yɛ Yehowa Dansefo a, wuhu sɛ woanya ɔhokafo nokwafo a wubetumi de wo ho ato no so.” Nokwasɛm ne sɛ Christine de asɛm a ɛwɔ 1 Petro 3:1 yɛɛ adwuma, na ɛboaa no paa!
ƐSOW ABA MFE BI AKYI
Bible asuafo bi wɔ hɔ a wofi ase fɛfɛɛfɛ nanso biribi nti wobɛhwɛ na wɔate kɔ. Wuhyia tebea a ɛte saa a, wobɛyɛ dɛn? Ɔhene Solomon kae sɛ: “Gu w’aba anɔpa, na nyi wo nsa mfi ho kosi anwummere, efisɛ wunnim nea ɛbɛyɛ yiye; eyi anaa eyi, anaasɛ abien no nyinaa bɛbom ayɛ yiye.” (Ɔsɛnk. 11:6) Ɛtɔ bere bi a ebetumi agye mfe pii ansa na nokware no afifi wɔ obi mu. Nanso ɛnkyɛ-nkyɛ wɔ n’afe; ebia akyiri yi onii no behu sɛ ehia sɛ ɔbɛn Onyankopɔn. (Yak. 4:8) Enti sɛ woampa abaw a, daakye wubetwa w’adwuma no so aba ma ayɛ wo nwonwa.
Wo de, ma yɛnhwɛ Alice asɛm yi. Otu fii India kɔɔ England na ofii ase suaa Bible afe 1974. Hindi kasa na na ɔka nanso na ɔpɛ sɛ osua Borɔfo kasa nso. Alice kɔɔ so suaa Bible mfe kakra na mpo na ɔkɔ asafo nhyiam wɔ Borɔfo kasa mu. Na onim sɛ nokware no ara na ɔresua no, nanso wamfa no aniberesɛm. Nea na ne koma di akyi ne sika, na na apontow biara mpa ne ti so. Akyiri yi Alice gyaee adesua no.
Na Stella na ɔne Alice sua ade ansa na adesua no regu. Nanso bɛyɛ mfe 30 akyi no, ne nsa kaa krataa fii Alice hɔ. Ɔkae wɔ krataa no mu sɛ: “Migye di sɛ w’ani begye sɛ wobɛte sɛ ɔbea a wo ne no fii ase suaa Bible afe 1974 mu no bɔɔ asu nnansa yi wɔ ɔmantam nhyiam bi ase. Woaboa me paa. Wuduaa nokware no wɔ me komam. Saa bere no na menyɛɛ m’adwene sɛ mehyira me ho so ama Onyankopɔn, nanso mamma m’adwene ne me koma amfi nokware no so.”
Krataa a Alice kyerɛw Stella no mu nsɛm bi ni: “Migye di sɛ w’ani begye sɛ wobɛte sɛ ɔbea a wo ne no fii ase suaa Bible afe 1974 mu no bɔɔ asu nnansa yi wɔ ɔmantam nhyiam bi ase”
Dɛn na ɛkaa Alice ma ɔsesaa n’adwene? Alice kae sɛ ne kunu wui wɔ afe 1997 mu, na ne werɛ howee paa. Ɔbɔɔ Onyankopɔn mpae sɛ ɔmmoa no. N’ano sii no annu simma du mpo na Adansefo baanu a wɔka Punjabi kasa baa ne fie. Wɔmaa no kratawa a wɔato din sɛ, Anidaso Bɛn na Ɛwɔ Hɔ ma Adɔfo a Wɔawuwu? Alice hui sɛ Yehowa atie ne mpaebɔ, na osii gyinae sɛ ɔbɛsan ahwehwɛ Yehowa Adansefo akyi kwan. Nanso ɔbɛyɛ dɛn ahu wɔn? Ohuu nhoma dedaw bi a wakyerɛkyerɛw nsɛm wom, na na Punjabi asafo no address a Stella de maa no wom. Alice kɔɔ Ahenni Asa so, na anuanom Punjabifo no gyee no fɛw so. Alice kae sɛ: “Mekɔɔ fie no mihui sɛ me ho abae me na m’adwinnwen so atew.”
Afei na asafo nhyiam mpa ne ti so, na ofii ase suaa Bible bio. Osuaa Punjabi kasa ne n’akenkan nso. Ɔbɔɔ asu afe 2003 mu. Asɛm yi na ɔde wiee krataa a ɔde kɔmaa Stella no: “Meda wo ase sɛ mfe 29 a atwam no wuduaa nokware no wɔ me komam na woyɛɛ nhwɛso pa maa me.”
“Meda wo ase sɛ mfe 29 a atwam no wuduaa nokware no wɔ me komam na woyɛɛ nhwɛso pa maa me.”—Alice
Dɛn na wubetumi asua afi osuahu ahorow yi mu? Sɛ yɛne obi sua ade na yenhu nkɔso biara a, ɛnsɛ sɛ yɛpa abaw efisɛ, sɛ ɔbrɛ ne ho ase na ɔpɛ sɛ ohu nokware no paa a, Yehowa bɛma nokware no anyin wɔ ne komam. Yesu kae wɔ mfatoho bi mu sɛ ogufo bi guu aba. Yesu kae sɛ: “Aba no fifi na ɛyɛ tenten, a onnim ɔkwan a ɛfaa so yɛɛ saa. Asase no ara de nkakrankakra sow aba; edi kan yi ahaban, afei ɛbɔ bɛtem, na aba ba bɛtem no ho.” (Mar. 4:27, 28) Aba no ara de nkakrankakra na enyin. Nokwasɛm ne sɛ Ahenni dawurubɔfo biara nnim ɔkwan a aba a wagu no fa so nyin. Enti wo de, kɔ so gu aba bebree, na daakye-daakye bi ebia wubetwa aba a wonhwɛ kwan.
Mma wo werɛ mfi mpaebɔ da. Georgina ne Christine kɔɔ so bɔɔ Yehowa mpae. ‘Kura mpaebɔ mu denneennen,’ na sɛ woampa abaw a, “nna pii akyi no,” ebia wobɛsan ahu “paanoo” a wotow petee nsu ani no.—Rom. 12:12; Ɔsɛnk. 11:1.